Kaataalooniyaaan maaliif walabummaa barbaadan? - BBC News Afaan Oromoo
Kaataalooniyaaan maaliif walabummaa barbaadan?
4 Onkololeessa 2017
Image copyright ERC VALLSImage
Goodayyaa suuraa Deeggaraan bilisummaa Kaataalaan abaaboo mallattoo riifarandamii dhorkame ilaalamu yoo poolisii Ispeenitti kennu
Gartuun bilisoomsaa Kaataalooniyaa, riifarandamii mootummaan Ispeen seeraan ala jedhe erga geggeessanii booda guyyoota muraasa keessatti walabummaa biyyattii ni labsina jedheera.
Namoonni kuma dhibbaan lakkaa'aman mormii cimaa irratti kan hirmaatan yoo ta'u, wal dhabbiinis guddachaa jira.
Akkamitti kanarra ga'an?
Kaataalooniyaan namoota miiliyoona 7.5 ta'aniif bakka jireenyaa yoo taatu, naannolee Ispeen qabeenyaan badhaadhan fi omishni guddaan itti argamu keessaa ishee tokko dha.
Waraanni waliinii osoo hin ka'iin dura bilisummaa kan qabdu, garuu bara 1939-75tti bittaa mootummaa abbaa irree Jeneraal Firaankoo jala kan turte dha.
Wayita Firaankoon du'u, sabboonummaan irra deebiin dagaagee, heera mootummaa 1978'n Naannoon Kaaba-Baha Ispeen, Kaataalaan, bilisummaa argatte.
Goodayyaa suuraa Kaataalaanonni gariin maaliif walabummaa akka barbaadan
Labsiin bara 2006tti bahe aangoo kana caalu naannoleef kenna ture, manni murtii heeraa Ispeen garuu aarii hooggantoota naannolee irraa qabuun, bara 2010tti labsichaa haqe,
Bilisummaan isaanii duraa xiqqaachuun kan isaan yaaddessee fi akka isaan yaadanitti murtoo sirrii hin taaneen bajanni hir'ifamuu, akkasumas malaammaltummaan biyyattii keessatti babal'achuu isaatiin Kaatalaanonni Sadaasa 2014tti filannoo walabummaa beekamtii hin qabne taasisan.
Angawoonnis %80 kan ta'an walabummaa barbaadu jedhanii turan.
Bilisoomsitoonni, filannoo Kaataalooniyaa bara 2015 erga injifatanii booda heera mootummaa, 'Ispeen adda hin baatu' jedhu cinaatti dhiisuun, riifarandamii geggeessuuf hojjachuu eegalan.
Gaaffichi maal ture?
Waraqaa filannoorra gaaffii tokko qofaatu ture:
''Kaataalooniyaan bifa riipabliikaan walabaa akka taatu ni feetaa?''
Saanduqoota deebii lama qofaatu ture: Eeyyee ykn Lakki
Seera mormisiisaa biyyattii keessatti, firiin riifarandamii kanaa kan hin jijjiiramne fi firiin filannichaa Komishinii Filannoo Kaataalaaniin ibsamee guyyoota lama gidduutti walabummaan biyyattii labsamuu qaba jedha.
Firiin riifarandamii kanaas guyyoota muraasa gidduutti eegamaa jira.
Image copyright JAUME CLOTETImage
Goodayyaa suuraa Pireezidantiin Kaataalaan Kaarlles Puuyijdemoon waraqaa filannoo walabummaa battaluma sanatti seera naannoo irratti mallatteessani
Kaatalaanonni dhugumatti walabummaa ni barbaaduu?
Deeggartoonni walabummaa biyyattii fedhan hiriirrawwan gurguddoo gaggeessaa turan. Guyyaa biyyaalessaa Fulbaana 11 kabajuuf lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman Barseloonaatti argamanii turan
Image copyright EPAImage
Goodayyaa suuraa Baanariiwwan gurguddoo korojoo filannoo fi alaabaa bilisoomsitootaa guyyaa biyyaalessaa Kaataalooniyaa Fulbaana 12 irratti mullatan
Tilmaamnii filannoo duraa rakkisaa ta'us, Adoolessa darbetti odeeffannoon mootummaa kaataalaaniin sassaabame %41 walabumma akka fedhan %49 ammoo faallaa kanaatiin filachuun maaltu ta'uu akka malu sirriitti ibsee ture.
Bara 2014tti namoonni miiliyoona 2.2 ta'an walabummaa akka deeggaran ni beekna, filannoo bara 2015tti, walta'iinsi paartiilee bilisa baastotaa 'Junts pel Si' deeggarsa paartii 'CUP' jedhamuun %48 injifatee ture.
Deeggarsi bilisummaa laafaadha yaada jedhutu ture, garuu tarkaanfiin mootummaan Ispeen filannichi akka hin gaggeeffamneef fudhachaa ture, poolisiin gaafa filanichaa fudhatee namoonni hedduun akka miidhaman taasisuun isaa, bilisa baastonni yaada isaanii akka cimsan taasisuu mala.
Kaataalooniyaa'n biyya walabaa ta'uuf sababa gahaa qabdii?
Yeroo dheeraaf kan turteefi afaan mataa ofii kan qabdu, akkasumas naannoo of dandeesse ta'uun seenaa waggoota 1,000 olii kan qabdu dha Kaataaloon.
Qaama murteessaa Ispeen kan taatee Kaataloon, jaarraa 15ffaa kaasee kan biyyattiitti hammatamte.
Namootni walabummaa fedhan garuu ''yeroo gara yerootti humnaan qaama Ispeen akka taatuuf duulli irratti taasifamaa ture'' jedhu.
Bilisummaan Kaataalooniyaa 'guyyoota muraasaa keessatti'
Naannolee Ispeen qabeenyaan badhaadhan keessaa tokko yoo taatu, %16 baay'ina uummata biyyattii fi omisha waliigalaa biyya keessaa (GDP) %19 naannoo gumaachitu dha.
Mootummaan giddu-galaa kan kennurra kan fudhatutu caala jedhamee bal'inaan yaadama.
Akka lakkoofsi bara 2014 bahe ibsutti, Kaataalooniyaa'n kan ofii fudhachuun fayyadamte caalaa Yuuroo biiliyoona 9.89 abbaa taayitaa Ispeeniif galchiteetti.
Araaraaf iddoon jiraa?
Qaamoleen lamaan ejjennoo isaanii iddoo cimsaa jiranitti, yeroodhaa yerootti waanti hin taane ta'aa jira. Bakka hundumtuu kan kooti jedhu kanatti, omaa beekuun hin danda'amu.
Riifaramdamii Kaataalooniyaa: Bilisummaan naannichaa 'guyyoota muraasa keessatti'
Dargaggeessa galma 'Gabataa la Shaggar' midhaasse
Sabboonummaa Oromoo fi Itoophiyaa haaraa ijaaruu
Biyya daa'imman dhalatanirraa ulfa baasuun itti caalu
Uggurri Huwaei akkamiin isin miidha?
Ifni guyyaa hirriba halkanii gaarii akka kennu beektuu?
Dubartoota Kooriyaa Kaabaa daldala quunnamtii saalaaf dirqaman
Hariiroo obolummaa Itoophiyaa haaraa ijaaruuf
Qabsooftuu duraanii ABUT Maqaleetti akaa'ii gurguruun jiraatan
'Ilbiisonni boocee balleessuuf dhufan hin banne'